SEENAA HAYYICHA SIBIILAA KENNOO.– Kutaa 2ffaa – Beekan Guluma Erena
SEENAA HAYYICHA SIBIILAA KENNOO.– Kutaa 2ffaa	Beekan Guluma Erena
Seenaa May 5, 2016OROMOO
25SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
SEENAA SIBIILAA KENNOO ‘Kutaa 2ffaa –
…Madaan Kun Barnoota Nuuf ta’uu qaba. Hayyuu Oromoo #Habashaan karatti Nyaatte SIBIILOO KENNOO(PHD Candidate) “Osoo Ilmaan Oromoo keessattuu baadiyaarraa dhufanii Magaalatti rakkatan ijji koo argu, #Mindaan koo yoo narraa hafeef Baankii keessa hin taa’u.” jedha irra deddeebi’ee…. SEENAA GABAABAA #Sibiiloo #Kennoo…..2ffaa Egaa Hayyuun hayyummaan isaa hin galmeeffamiinf kun imala eegale itti fufeera. Bara 2000 A.L.A Firii boonsaa dhaan ‘BA’ isaa gonfachuun Abdii jireenyaa horate. Abdii Maatii isaas dheeresse, Jireenyi Maatii inni keessaa bahe, obboleeyyan barnoota gadiin barachaa jiranii ife jechuun gammadan. Sibiiloon yoom Bubbuleree, Bara 2001 A.L.A Dhaabbata Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Gambeellaa(#GambellaManegementInstitute) keessatti mindeeffame.Yoona Sibiiloon Abdii namni hedduu abdate haalumaa abadateen hojitti hiike, Maatii bira darbee, Anaafi ijoollee isa beekan qofa osoo hin taane ijoollee Oromoo mana barumsaa keessa jirtu hunda adeemsa inni itti baratee sadarkaa kana gaheen wal madaalchisee qarqaarutiii ka’e. Jecha #Sibiiloo “Osoo Ilmaan Oromoo keessattuu baadiyaarraa dhufanii Magaalatti rakkatan ijji koo argu, #Mindaan koo yoo narraa hafeef Baankii keessa hin taa’u.” jedha irra deddeebi’ee…. Sibiiloon Dandeettii Ajaa’ibaa qabuun iddoo hojii itti mideeffamettis milkaa’ina galmeessiseen waggaa tokko booda Mootummaan Naannoo Gambeellaa Ati nama Boriiti deemii baradhu jedheenii Bara 2003 A.L.A Barnoota Digrii Lammataa (MA) isaatiif gara Yuunibarsitii Finfinnee deebise, yeroo kana MA isaa ‘International Relation’dhaan qo’ate. Barnootasaa wagaa lamaaf Finfinnetti hordofe. Sibiiloon yeroo kana guutumatti Siyaasa Dr. Mararaa hordofuu cimsateera, Yeroo kanatti Dr.Maraaraan Gaggeessaa Paartii duraanii waan tureef Sibiiloonis Hirmaannaa olaanaa keessaa qabaa. Dr.Mararaan Advisor Barnoota idilee isaas waan tureen namoota iciitii Sibiiloo beekan keessaa isa duraati. Kan biraammoo Dr. Maammoon, Gaggeessaan Barnoota Damee Filoosofii Yuunibarsitii Finfiinnee Hiriyyummaafi Namoota Sibiiloon dhiyeenyatti beekan isa lammaffaadha. Haaluma Kanaan bara 2005 A.L.A, Sibiiloon Barnoota isaatiin Dirgirii Lammataa qabate. –
Yerooma kana Sibiiloo gufuun tokko tokko mudachuu jalqabdee jirti. Baruma eebbasaa kana Dr.Mararaan Biyya USA deemee, Advisor kee waan hin jirreef Qorannoo(Research) kee namni beeku isa qofa waan ta’eef hanga inni dhufutti dhiyeessuu hin dandeessu yeroo jedhamu wanta an qabatamaan beekuudha. Sibiiloon beekaadha, Erga Dirgii lamaffaa qabatee immoo gara Mootummaa isa barsiisee Gambeellatti hin deebine. Yeroo sana Pireezidaantiin Naannoo Oromiyaa Obbo Abbaa Duulaa ture. Sibiiloonis Qajeelee Waajjira Obbo Abbaa Duulaa deemee, Ilma Oromoo akka ta’eefii Dandeetiisaatiin Hawaasaa ofii tajaajiluu akka barbaadu gaafate, yeroosuma Xalayaan gadi nuuf haa dhiifamuu Oromiyaa irraa Gara Mootummaa Gambeellaa barraaye. Dookumatiin Sibiiloo fe’amee gara Waajjira Mootummaa Naannoo Ooromiyaa gale. Sibiiloon Abshaalas ture, wanti hubachuu qabdan Sibiiloon Siyaasa Dr. Mararaa gaggeessaa waan jiruuf Waajjira Oromiyaa galuuf hin feene. Dookumatiisaa mala baafatuun malate. Yeroma sana Barsiisaa Yuunibarsiitii ta’uuf dorgome(Jimmaafi Baardaar). Yuunibarsitii Lamaan irraayyuu waamame. Ammas Carraa PHD kootiif kan na fayyadu jedhee Yuunibarsitii Baardar Filate.
Mala Dookumantii isaa argatuun erga malate booda, Abbaan Duulaa Biyya alaa haa deemuu eegee, Namootni waajjiricha keessa jiran yoo inni achitti ramadame angoo dhabiinsaaf waan sodaataniif dookumatii isaa akka kennaniif ni beeka. Yoo Abbaan Duulaa Biyya Alaa deeme dhaqee dookumantii koo barbaade jennaan gaaffi malee kennameef. Bara 2006 A.L.A Yuunibarsitii Baardaaritti imale. Dararaa Ilmaan Oromoo Naannoo biraa keessa hojjatan fi jiraatan keessa jiranis dhandhame, jireenya hadhaayaa dhandhame. Dararaa duruu waan beekuuf sodaa malee hojjate, Ilmaan Oromoo barnoota isaa baratanis mataa ol qabatanii barachuuf carraa argatan. “Barataa SIIVIKSII Obbo Sibiiloo kan ture Barataan tokko “ይህ ዐይነቱ ጋምበላ ነዉ ዕንጂ ኦሮሞ አይደለዉም” jedhanii natti lolan warri Amaaraa jedha Mucaan kun.
” #IttiFufa>> KUTAA 1FFAAF As Tuqaa –
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa25SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← JIREENYA GURRAATTII!—Qeeqaa jiruuf jireenya keenya kanaa yeroo dargaggoon kun walaleessu!!
HIN KUTATIIN ABDII! – Walalooo oonnachiisaafi Abdii namaa horu!! →